Ambohipotsy : « Touristes » roa voaendaka – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → avril → 6 → Ambohipotsy : « Touristes » roa voaendaka
Ambohipotsy : « Touristes » roa voaendaka
Tsy zava-baovao akory na dia efa mba nilamindamina aza izany tao ho ao. Ny alakamisy teo dia nisy mpizaha tany roa vavy izay niharan’ny sinto-mahery. Tokony ho tamin’ny efatra ora sy sasany hariva no nitranga ilay fanendahana, teo Ambohipotsy. Lasa ny finday tsara tarehy miisa roa, ny vola mitentina 520.000ariary ary ny solosaina. Ny tena olana dia isan’ny nendahin’ireo jiolahy koa ny taratasy rehetra mahakasika ny asan’izy ireo. Maizina tanteraka ny tany aman-danitra ho an’ireo mpizaha tany satria raha hampifaly tena mba hijery tanàna ny anton-dia, na ny taratasy izay hahafahana miverina aza lasan’ny jiolahy koa. Soa fa natanjaka ny « guide touristique » izay nitondra azy ireo ary nanao izay ho afany tamin’ny fisamborana. Ny iray no azony ary nentina avy hatrany teny amin’ny polisy misahana ny boriborintany faharoa. Nosokafana teo ihany ny fanadihadiana izay niafara tamin’ny nahazoana ny naman’ilay olon-dratsy. Telo izy ireo no voasambotry ny polisy ary voamarika fa mbola samy tanora avokoa. Mitondra endrika ratsy ho an’ny fizahan-tany ny fisian’ny mpanendaka eny amin’ny « La haute ville » ireto. Toerana izay tena tsidihan’ny mpizaha tany anefa ao Anatirova sy ny manodidina azy, satria manankarena ara-tantara no sady fitaratry ny fiaraha-monina malagasy koa ny vakoka misy eny. Efa betsaka izay vahiny voaendaka izay, ary mila fandraisana fepetra ny tokony hanamafisana ny fandriam-pahalemana, indrindra amin’izao vanim-potoana izay manomboka misokatra izao ny fizahan-tany.
Liliane Averty 7 avril 2019 at 9 h 15 min · Edit
Miombon-kevitra aminao aho M ou Mme Réfléchis sur . Vahaolana mety hanafoana tanteraka n’y toenjavatra toy izao ny école obligatoire . Formation professionnelle. Indrindra asa ho an’ny olona rehetra. Azo atao tsara ireo rehetra ireo.
Rolland Edouard Firmin 7 avril 2019 at 8 h 57 min · Edit
Toe-javatra mampalahelo sy mahamenatra ny toy izao ka tokony mitady vahaolana farany izay haingana ny mpitondra,eny na na CUA dia afaka mamaha an’izany aminy fametrahana securite eny antoerana toy ireny,lay finiavana handamin-javatra no tsy ampy eo aminy tompon’andraikitra isan’ambaratonga
REFLECHIS 6 avril 2019 at 9 h 08 min · Edit
Mitady ho fidina sy hiditra haut fonctionnaire sy mpitondra daholo izay mba manan-katao rehetra fa eêeeee…., i Ikotozafy ihany no Alexis…
Ny zavatra mampalahelo toy izao dia tsy hisy fitsaharany mihitsy raha mbola mihinina ny tsy hampianatra ny zaza malagasy araky ny tokony ho izy ihany ny Mànana ny FAHEFANA, ( EDUCATION NATIONALE) , ny efa diso làlana na ankizy na lehibe, tokony hisy fampianarana hiasa ( formation professionnelle,…) sy tolotra asa sahaza azy ireny, ( technique, tertiare,….)
Fa indrisy …zavatra hafa na hevitra tsy misy, no mandravaka ireo MANANA FAHEFANA….